တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ်နိုင်ငံသံ အမတ်ကြီး H.E. Mr. Christian Lechervy အားလက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာပြင်သစ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Christian Lechervy အား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ကုန်းမြင့်သာရှိ ဇေယျာ သီရိဗိမာန်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့်တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက် ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးနှင့်အတူ ပြင်သစ်နိုင်ငံအောက်လွှတ်တော် အမတ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ် နိုင်ငံစစ်သံမှူး Lt. Col. Nadia PIERCYနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် အာဆီယံအဖွဲ့နှင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အခြေအနေများ၊ အာဆီယံ အဖွဲ့နှင့် BIMSTEC အဖွဲ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပြည်သူများမှ ရွေးချယ်သည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းပေါ်၌ လျှောက်လှမ်းရာတွင် ခိုင်မာမှုရှိစေရန်အတွက် တပ်မတော်မှဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် နေမှု အခြေအနေများ၊ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်အခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေး၊ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး အတွက် သတင်းဖလှယ်ရေးတို့တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် နိုင်မည့်အခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်နိုင်သည့် အလားအလာနှင့် အခွင့်အလမ်းကောင်းများရှိနေသည့် အခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ တွင်လာရောက် နေထိုင်၍ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ပြင်သစ်နိုင်ငံသားများအား ဥပဒေနှင့်အညီ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးလျက်ရှိသည့်အခြေအနေများ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဇီဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရေး၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာအခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဆိုင်ရာအခြေအနေများအား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရင်းရင်းနှီးနှီးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ယင်းနောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာပြင်သစ် နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးတို့သည် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းအပြန်အလှန်ပေးအပ်ပြီး တက်ရောက်လာကြသူများနှင့်အတူ စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ သညျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာပွငျသဈနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E. Mr. Christian Lechervy အား ယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ ရနျကုနျမွို့၊ ကုနျးမွငျ့သာရှိ ဇယြော သီရိဗိမာနျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျကွီး စိုးထှဋျနှငျ့တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျ ကွပွီး မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ပွငျသဈနိုငျငံသံအမတျကွီးနှငျ့အတူ ပွငျသဈနိုငျငံအောကျလှတျတျော အမတျမြား၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ပွငျသဈ နိုငျငံစဈသံမှူး Lt. Col. Nadia PIERCYနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ အာဆီယံအဖှဲ့နှငျ့ ပွငျသဈနိုငျငံ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနိုငျမညျ့ အခွအေနမြေား၊ အာဆီယံ အဖှဲ့နှငျ့ BIMSTEC အဖှဲ့တှငျ မွနျမာနိုငျငံမှအဖှဲ့ဝငျနိုငျငံအဖွဈ ပါဝငျဆောငျရှကျနမှေုအခွအေနမြေား၊ မွနျမာနိုငျငံတှငျပွညျသူမြားမှ ရှေးခယျြသညျ့ ပါတီစုံဒီမိုကရစေီ လမျးကွောငျးပျေါ၌ လြှောကျလှမျးရာတှငျ ခိုငျမာမှုရှိစရေနျအတှကျ တပျမတျောမှဆောငျရှကျနမှေုနှငျ့ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးရရှိရနျ ကွိုးပမျးဆောငျရှကျ နမှေု အခွအေနမြေား၊ ကာကှယျရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျအခွအေနမြေား၊ မွနျမာနိုငျငံနှငျ့ ပွငျသဈနိုငျငံ စဈဘကျဆိုငျရာဆကျဆံရေး၊ ကာကှယျရေးဆိုငျရာပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေး၊ အကွမျးဖကျမှု တိုကျဖကျြရေး အတှကျ သတငျးဖလှယျရေးတို့တှငျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျ နိုငျမညျ့အခွအေနမြေား၊ မွနျမာနိုငျငံတှငျရငျးနှီး မွှုပျနှံမှုပွုလုပျနိုငျသညျ့ အလားအလာနှငျ့ အခှငျ့အလမျးကောငျးမြားရှိနသေညျ့ အခွအေနမြေား၊ မွနျမာနိုငျငံ တှငျလာရောကျ နထေိုငျ၍ လုပျငနျးမြားဆောငျရှကျလကျြရှိသညျ့ ပွငျသဈနိုငျငံသားမြားအား ဥပဒနှေငျ့အညီ ကာကှယျစောငျ့ရှောကျပေးလကျြရှိသညျ့အခွအေနမြေား၊ သဘာဝပတျဝနျးကငျြနှငျ့ ဇီဝပတျဝနျးကငျြထိနျးသိမျး ရေး၊ ရာသီဥတုပွောငျးလဲမှုဆိုငျရာအခွအေနမြေား၊ မွနျမာနိုငျငံတှငျ ကနျြးမာရေးနှငျ့ပညာရေး ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှု ဆိုငျရာအခွအေနမြေားအား ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ ရငျးရငျးနှီးနှီးဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
ယငျးနောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာပွငျသဈ နိုငျငံသံအမတျကွီးတို့သညျ အမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျးအပွနျအလှနျပေးအပျပွီး တကျရောကျလာကွသူမြားနှငျ့အတူ စုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွသညျ။